Haddii waraysi shaqo ku qoris awgeed aad degmo kale u tegi doonto, waxaa lagu siin karaa taageero-dhaqaaleedka kharashyada socdaallada iyo hoyga. Waa haddii aad ka qaybgasho barnaamij ama baaritaan lagu qaban doono degmo aan ahayn degmada aad degan tahay. Arjiga taageerada waa in socdaalka kahor lagu dhaqaaqa.
Gunnada socdaallada waraysiyada shaqada
Markii waraysiyada shaqada lagula yeelanayo waxaa lagu siin karaa taageero-dhaqaaleedka kharashyada socdaallada iyo kharashyada hoyga, waa haddii shuruudaha hoos ku qoran aad buuxin karto:
aad buuxsatay 20 sano oona ama halis ugu jirto inaad noqoto shaqolaawe noqoto
Haddii booqashada ay lagamamaarmaan tahay shaqo ku qorista iyo in kale anaga ayaa qiimaynteeda iskaleh
in shaqada aad ka hesho Kaydka shaqooyinka bannaan [Platsbanken] ama dalka shaqada aad ka raadsnaayso ku yaallo dalalka Isbahaysiga Yurub, Is-bahaysiga dalalka Midowga Yurub, Norway, Iceland iyo Liechtenstein. Shaqada waxaa laga heli karaa barta internetka [Eures].
Gunnada markii barnaamij aad ka qaybgalayso
Haddii aad ka qaybgasho mid kamid ah barnaamijyada, goobtuna ay ku taallo meel aad maalin kasta gaadiid ku tegi karin, waxaa lagu siin karaa taageero-dhaqaaleedka hoyga iyo kharashyada dheeraadka ah. Xaaladdaas waxaa lagu siin karaa taageero-dhaqaaleedka socdaallada iyo kharashyada hoyga haddii adiga:
ka diiwaan-gashan tahay mid ka mid ah barnaamijyadayda
socdaal u sabab ah Go’aanka barnaamijka sal-dhigidda.
Sidee baa socdaalka u xajista?
Socdaal kahor waa inaad arjiga taageero-dhaqaaleed socdaalka iyo hoyga u qorata ama kala xiriirta Xafiiska Shaqada.
Markaas kaddib ayaan hubsanaynaa haddii dhammaan shuruudaha aad buuxin karto iyo in kale, kaddib ayaan go’aan ka gaaraynaa haddii aad xaq u leedahay taageero-dhaqaaleed iyo in kale.
Go’aanka kaddib waxaad xajisan kartaa socdaallada dayuuradaha dalalka Isbahaysiga Yurub ama Is-bahaysiga dalalka Midowga Yurub, Norway, Iceland iyo Liechtenstein iyo kuwa tareenada ee dalalka Iswiidan, Norway iyo Denmark. Xitaa laf ahaantaada ayaa socdaallada xajisan karo, xaaladdaas goor dambe ayaa codsan kartaa in kharashyada lagu soo celiyo.
Sidatan ayaa loo dalbada dib u soo celinta kharashyada
Gunnada waxaad codsan kartaa bisha ku xigta. Sidatan sameey:
Adigoo adeegsanayo aqoonsiga digitalka ee loo yaqaanno [e-legitimation] sida tusaale [mobilt bank] guda-gal [Mina sidor].
Haddii aan go’aaminno inaad xaq ku leedahay gunnada, waxay kaaga muuqan doontaa [ Ersättning för resa]. Haddii wax gunnad aadan dalban karin, kama muuqan doonto xulashada.
Jag-sii [Ersättning för resa] kaddib ku buuxi xogtaada hab waafaqsan tilmaan-bixinta ku qoran adeegga digitalka.
Marka aad dhammeyso saxiix adigoo adeegsada aqoonsiga digitalka ee loo yaqaanno [e-legitimation].
Intee in la eg taageero-dhaqaaleedka socdaalka ayaa lay siinayaa?
Ku saabsan socdaallada-maalmeed waxaa lagu siin karaa qaybta kharashyada socdaalka oo 600 karoon ka badan bishii, ama kharashka ka badan kan caadiga kaaga baxo gaadiidka halka aad degan tahay.
Kharashyada socdaalka u sabab ah waraysi shaqo ku qorid, waxaa ugu badnaaantii lagu siin karaa 2 500 karoon.
Go’aanka barnaamijka sal-dhigidda dartiisa haddii aad na soo booqan doonto, waxaa lagu siin doonaa gunnada kharashka oo idil.
Gunnada kharashka hoyga ugu badnaaantii waa 110 karoon maalintii, laakin bishii kama badna 2 400 karoon.
Goormee baan ugu horreyn codsan karaa lacagta safarka?
Haddii safar lacag laguugu oggolaaday, waxaad markaas lacagta dalban kartaa hal bil dib marka aad safarka ama safarrada sameysid. Muhiim - ha illoobin in aad rasiidyadaada kaydsatid maxaa yeelay waxaad iyaga raacineysaa codsigaaga.
Sidee baan ku codsadaa lacag safar oo gaari ah?
Haddii safar lacag laguugu oggolaaday waxaad markaas lacagta safarkaaga gaariga dalban kartaa hal bil dib marka aad safarka ama safarrada sameysid. Marka aad dalbaneysid lacagta safarka ee gaariga waxaad ku buuxineysaa inta maalin aad safartay. Hal safar-maalmeed wuxuu u dhigmaa sii socod iyo soo socod adigoo gurigaaga ka tegay. Haddii aad gaari ku safreysid uma baahnid in aad wax rasiid ah soo raacisid codsiga.
Waqtigee baan ku soo qoraa codsigeyga?
Waxaad ka soo billaabeysaa bishii aad safartay ama billawday safarrada. Waa in ay noqotaa isla bisha xagga sare uga qoran codsiga.
Haddii aad leedahay kaar waqti shaqeynaya oo laba bil isaga gudbaya waxaad soo qoreysaa laga billaabo taariikhdii uu kuu shaqeeyay ilaa iyo maalinta ugu dambeysa ee uu ku egyahay.
Goormee baad lacagta soo shubeysaan?
Si aan lacagta kuugu soo shubno waa in aad marka hore codsiga lacagta soo buuxisaa, markaas ka dib ayaad heli kartaa lacagahaaga. Caadi ahaan waxaad lacagta heleysaa dhawr maalin oo caadi ah gudohooda. Haddii uu codsigaagu dhammeystir u baahanyahay waxaa dhici karta in ay waqti dheer qaadato inta aadan lacagaha helin.
Sidee baan lacagaheyga ku helayaa?
Waa Swedbank cidda maareyneysa lacagbixinta. Haddii aad leedahay akoon bangi oo ku xiran nambarradaada aqoonsiga halkaas ayaa lacagta lagu shubayaa iyadoon la eegeyn bankiga aad iska leedahay. Swedbank wuxuu kuu soo dirayaa farriin ay la socoto warbixin ku aaddan lacagbixinta.
Haddii aadan lahayn wax akoon bangi ah waxaad beddel ahaan heleysaa jeeg boosto kuugu imaanaya.
Haddii aad jeeg heshay, aadna dooneysid in lacagta xigta akoon bangi laguugu soo shubo waa in aad la xiriirtaa Swedbank. Waxaad akoonkaaga ku soo gudbin kartaa barta intarneetka ee Swedbank
Xitaa qofka i raacaya (i kaxaynaya) ma heli karayaa lacag?
Haa, haddii aad u baahantahay in safarradaada laguu raaco wuu heli karyaa qofka ku raacaya kharashaadka safarka uga baxa, habeen soo dhaxa, kharashaadka hoyga ku meel gaarka ah iyo mushaarki raacitaankaas uga baaqday.
Waa maxay sababta la iigugu soo wargeliyay in ay waajib igu tahay in aan lacag soo celiyo?
Haddii aad na siisid warbixin khaldan ama aad si kale u sababtay in lacag si khalad ah laguugu soo shubo ama laguu soo shubay lacag intii la rabay ka badan, waxaa waajib kugu noqon karta in aad lacag soo celisid.
Waxaan maqlay lacago lagu bixiyo magaalooyin isaga gooshidda iyo kaalmo lacageed oo guuritaanka lagu bixiyo. Taageeradaas weli ma la heli karaa?
Maya, iminka taageero laguma heli karo in magaalooyin loo kala goosho iyo in la guuro.
Intee baan la xiriiraa haddii aan qabo su’aalo dheeraad ah?
Haddii aad qabtid su’aalo aan halkan looga jawaabin ku soo dhawaw in aad nala soo xiriirtid. Sheegna in arrintaadu ay khuseyso lacag safar.